फोहोर पोखरी सफा गर्न पोखरीमा हाम फाल्नैपर्छ, त्यसैले राजनीति आएँ – नयाँ प्रहर
फोहोर पोखरी सफा गर्न पोखरीमा हाम फाल्नैपर्छ, त्यसैले राजनीति आएँ
ललितपुर, जेष्ठ १७
मथुरा छात्रवृत्ति कोषबाट आजसम्म ३० जना भन्दा बढी गरिब तथा निम्न वर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीहरु आफ्नो नामको अगाडी डा. थपेर सेतो लुगामा विमारी जाँच्दै छन छन। यही कोषका अध्यक्ष हुनुहुन्छ जेसन वैद्य।सामाजिक कामको लागी हुने वृहत सांगितिक कार्यक्रमहरुमा धेरै पटक गिटार बजाउदै हिड्दा भेटिनुभएका गिटारिस्ट जेसन वैद्य ज्यु पेशाले उद्यमी हुनुहुन्छ। उहाँको आफ्नै ब्यान्ड पनि छ भने विभिन्न व्यवसायमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ।
स्थायी ठेगाना ललितपुर महानगरपालिका वडा नं २६ सुनाकोठीमा बसोबास गरिरहनुभएको उहाँ पछिल्लो समय विवेकशील साझा पार्टीमा आबद्ध भई राजनीतिमा पनि सक्रिय देखिनुभएको छ। आजको राजनिति विशेष अन्तरवार्तामा जेसन वैद्य ज्यु संगै गरिएको कुराकानी -:
हजुर आरामै छु ।
केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोली?
व्यवसाय चलिरहेको छ।सामाजिक कामहरु पनि गर्दैछु। अरु आजभोली राजनितिमा नै व्यस्त भईरहेको छु।
साँच्ची तपाई त उद्यमी मान्छे, गिटारिस्ट पनि हो तर एक्कासी राजनितिमा आउनुभयो,के कुराले प्रेरित गर्यो राजनितिमा आउन?
म पेशाले उद्यमी हु। गितार र संगीत मेरो शोख हो। पछिल्लो २०-३० वर्षमा जब म हुर्किए संसार कहाँ बाट कहाँ पुगिसक्यो। द.कोरिया, दुबई, जापान आदी देशहरुको विकास मेरो पुस्ताले हेर्दाहेर्दै भयो तर हामी भने सोचे अनुरुप अगाडी बढ्न सकेनौ। वाहिर बसेर गुनासो गरेर फाईदा देखिन,त्यही भएर आफै सकेको गर्छु भनेर राजनितिमा आएँ।
विकेकशील साझा नै किन रोज्नुभयो त?
अरु राजनीतिक दलहरुको क्रियाकलाप पनि बुझ्ने कोसिस नगरेको हैन। मेरो विचार र विवेकशील साझाको विचार मेल खायो। विवेकशील साझाको विगतका कामहरु पनि सुक्ष्म अध्ययन गरे अनि यसैमा लागे।
विवेकशील साझामा लाग्नुभएको कति भयो?
सक्रिय रुपमा नै लागेको त ६ महिना भयो तर सदस्य नै नभएपनि दुई वर्ष जति वाहिरै बसेर सहयोग र समर्थन गरे।
विगत छ महिनाको अनुभव कस्तो रह्यो त?
साँचो कुरा गर्ने हो भने मैले सोचेको जस्तो रहेनछ।म पनि नयाँ छु सिक्दैछु,पार्टी पनि भर्खर वामे सर्दैछ तर मैले पार्टी भित्रको साथीहरु बाट भने नसोचेको सहयोग पाएँ।त्यही सहयोगका कारण पनि गर्न सक्छु भन्ने आँट आएको छ र आगामी दिनको मार्गचित्र बनाउदैछु।
राजनितिमा टिक्छु जस्तो लाग्छ त तपाईलाई?
टिक्ने कुरा हैन। राजनीतक म्याराथनमा थाक्ने, पछि हट्ने र फर्कने ठाउँ छैन । सम्हालिएर, समेटेर, सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने हो ।मेरो लक्ष्य मेरो देश समृद्ध पार्ने सपना साकार पार्नको लागी पनि म यहाँ टिक्नै पर्छ।
तपाई त उद्यमी पनि हुनुहुन्छ,राजनितिमा लाग्दा उता असर पर्दैन?
व्यवसाय गरेको धेरै भयो। एउटा सिस्टममा आफै चलिरहेको छ। सिस्टम भयो भने सबै चिज सहज हुन्छ। फेरी म एक्लैको व्यवसाय हैन। साथीहरु छन। हामी मिलेर काम गर्छौ र म त भाग्यमानी छु व्यवसायका साथीहरुले नै मलाई राजनिति गर्न प्रेरित गरिरहेका छन।
आफैलाई चाही राजनितिमा कहाँ सम्म पुग्छु जस्तो लाग्छ?
मेरो लक्ष्य भनेको सबैले महशुस हुने गरी काम गर्न सक्ने स्थान सम्म पुग्नु हो। यही पद वा स्थान भन्ने छैन। जे होस आम नागरिकले आफ्नो दैनिक जिवनमा परिवर्तन महशुस गर्न सक्ने स्थान सम्म पुग्छु। चाहे त्यो वडाको अध्यक्ष होस वा सांसद।
अहिले सम्म बुझ्दा के रैछ त यो क्षेत्रको समस्या?
राजनिति फोहोरी खेल हो भनेर भनेको नसुनेको हैन। त्यही भएर पनि बुझेर यसमा हामफाल्न समय लाग्यो। तर यो खेल आफैमा फोहोरी हैन रहेछ।खेलाडीहरुको नियत र प्रवृत्ति का कारण फोहोर देखिएको वा भएको रहेछ। समस्या त्यही नियत र प्रवृत्ति नै हो भन्ने मेरो बुझाई हो।
एक्कासी राजनितिमा प्रवेश गर्दा घरपरिवारबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भयो?
सुरुमा राजनितिमा गए भन्दा त पत्याएन्न। हो रहेछ भएपछि चाही बुवाले ठिक गरेछस खुशी लाग्यो तर राजनितिलाई कमाईखाने भाँडो नबनाउनु भनेर भन्नुभयो। परिवारको सहयोग र साथ छ मलाई।
नेपाली राजनितिको सकरात्मक पक्ष के पाउनु भयो त?
नेपाली राजनितिको सकारात्मक पक्ष भनेको यसको संभावना हो। नेपाली राजनितिमा गर्न पर्ने र गर्न सक्ने धेरै ठाउँ छ। विकासन्मुख देशमा हुने राजनितिको सबैभन्दा राम्रो पक्ष नै यही हो तपाईलाई जुन क्षेत्रमा पनि संभावना देखिनेछ।
तपाई त समाजसेवामा लाग्नुभएको पनि धेरै भयो, त्यति ले मात्र चित्त नबुझेर राजनितिमा आउनु भएको हो?
हजुर समाजसेवा गरेको धेरै भयो। असल राजनिति गरियो भने समाजकै सेवा हुने हो। राज्यको निति राम्रो बनाउन सकियो भने त्यसबाट धेरै मान्छे लाभान्वित हुन्छन र त्यो भन्दा ठुलो समाजसेवा पनि त नहोला नी।
समाजसेवालाई निरन्तरता दिनुहुन्छ त?
त्यो त छोड्नै सकिन्न। मेरो हजुरबुबाको चाहना अनुसार स्थापना भएको कोषबाट मात्रै आज सम्म ३० जना ले डाक्टर बनिसक्नु भयो।२२/२४ जना पढ्दै हुनुहुन्छ। यो कोष निरन्तर चलिरहनेछ।साथै अन्य सामाजिक काम पनि हात हालिरहेको नै हुन्छु।
नेपाली राजनितिबाट निराश युवाहरुलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ?
हुनत मैले पनि आफ्नो युवा अवस्थाको अन्तिम चरण तिर मात्र राजनितिमा लाग्ने निर्णय गरे तर मैले यस बारे चाख चाही पहिल्यै बाट लिएको हो। युवाहरुलाई म यही भन्न चाहन्छु कि राजनितिलाई धृणा नगरिदिनुस। राजनितिमा आउनै पर्छ गर्नैपर्छ भन्ने छैन तर बुझ्न चाही पर्छ। के राम्रो के नराम्रो, देश कतातिर जाँदैछ त्यो चाही बुझ्नै पर्छ।
अन्तिममा तपाईलाई भन्न मन लागेके कुरा केही छ भने?
पोखरी फोहोर देख्नुभयो भने किनारमा बसेर गाली गरेर,कराएर त्यो फोहोर सफा हुदैन। त्यस्को लागी तपाई त्यसभित्र हामफालेर सफा गर्ने पर्छ। नेपाली राजनिति पनि त्यस्तै पोखरी हो। म पनि सफा गर्न आएको छु।तपाईहरु पनि आउनुस। गुनासो गरेर मात्र केही हुनेवाला छैन। हामीले नबनाए छिमेकीले आएर देश बनाईदिनो वाला छैन। धेरै अधिकारको कुरा मात्र गर्यो अब जिम्मेवारी निभाउने बेला आएको छ। हातेमालो गरौ।
← यस्ताे छ वर्ल्डकपकाे समय तालिका (नेपाली समय अनुसार)